RAZAFIMAHEFA HERIMANANA: Voafidy ho filoha vaovaon’ny Antenimierandoholona – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 1:16
Vonona hifanome tanana amin'ny mpanatanteraka ny Antenimierandoholona vaovao, hoy ny Filohany.
Accueil/Politika/RAZAFIMAHEFA HERIMANANA: Voafidy ho filoha vaovaon’ny Antenimierandoholona
RAZAFIMAHEFA HERIMANANA: Voafidy ho filoha vaovaon’ny Antenimierandoholona
Tao amin’ny Lapa maitson’Anosikely no nanatanterahana ny fivoriana manokana, izay sady fivoriana voalohany ihany koa, nataon’ireo senatera vaovao miisa 18, omaly. Fihaonana izay natao hifidianana ny Filohan’ity Andrimpanjakana ity, ary nandinihana mahakasika ny Fitsipika anatiny mifehy ny Antenimierandoholona. Lany ho Filoha tamin’izany ny Senatera Razafimahefa Herimanana. Ity farany izay nanome tokony ny fahefana mpanatanteraka fa hifanolo-tanana amin’ny asa fampandrosoana rehetra tian-kapetraka eto amin’ny tany sy ny Firenena.
Lucien R. 20 janvier 2021
Tamin’ny salanisa 100% no nandanian’ireo Senatera 18 an’Andriamatoa Razafimahefa Herimanana ho Filohan’ny Antenimierandoholona vaovao. Izy izay kandida tokana natolotry ny vovonana “Isika rehetra miaraka amin’I Andry Rajoelina” na Irmar. Tsy nisy ny vato maty na vato fotsy. Nandray ny toerana maha Filoha azy avy hatrany ny Senatera Razafimahefa Herimanana. Nandritra ny fandraisam-pitenenany, nilaza ity Filoha vaovaon’ny Antenimierandoholona, fa mandalo fotoan-tsarotra ny firenentsika ankehitriny, mitovy amin’ny firenen-drehetra eran’izao tontolo izao. Teo anatrehan’izany anefa, nankasitraka ny ezaka vitan’ny Filoha sy ny Governemanta rehetra ny tenany tamin’ny ady amin’ny Covid-19. Fotoana izay nanambarany fa hanao izay azo atao rehetra ny senatera vaovao amin’ny fiarahamiasa amin’ny Governemanta. Zava-dehibe, hoy izy, ny fifanomezan-tanana amin’ny toerana misy ny firenentsika ankehitriny. Nihena ihany koa ny harin-karentsika. Isika rehetra mitambatra, noho izany, no hanarina ny firenena, hoy hatrany izy.
Vonona ny hanampy ara-kevitra ireo mpanatanteraka ny Antenimierandoholona vaovao, raha ny fanambarany. Etsy ankilany, nampahatsiahiviny fa anisany andraikitry ny Loholona ihany koa ny fiahiana ireo vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana (CTD). “Mila mpisolovava, mila mpitondra teny miahy ireny olom-boafidy ireny”, hoy izy. Nilaza ho vonona hifanerasera eny amin’ny CTD ny senatera ankehitriny. Vonona ihany koa ny Antenimierandoholona hampandany ny lalàna mifanan-drify amin’ny tombontsoam-bahoaka. “Ny filoha miasa mafy, ny namana sasany sady tsy mihira no tsy manao tsianjery, ny fanoherana miandry an-kendry tohina fotsiny hamelezana. Ilaina ny fanoherana fa ny toerana misy ny firenena amin’izao ilàna fifanomezan-tanana”, io no namaranany ny lahateniny.
Nanotrona ny Praiminisitra
Isany nanatrika ny fotoana tetsy Anosy, omaly, ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta, Ntsay Christian. Nisy ny tafa nifanaovany tamin’ny mpanao gazety niarahabany ireo Loholona vaovao miisa 18, ary niarahabany manokana ihany koa ny Filohan’ny Antenimierandoholona vaovao. Miaina ao anatin’ny tany tan-dalàna isika, hoy ny Lehiben’ny governemanta, ka ao anatin’izany ny fanajana ny fisian’ny fifandimbiasan-toerana eo amin’ny Andrimpanjakana rehetra, toy ny eo anivon’ny Antenimierandoholona. Inoana sy antenaina fa raha ny tombontsoa ambonin’ny firenena no trandrahina sy jerena hatrany, dia hiroso tokoa amin’ny fitsinjovana ny vahoaka Malagasy isika, hoy ihany ny Praiminisitra.
Hisy fiovana ny fitsipika anatiny
Taorian’ny fifidianana ny Filohan’ny Antenimierandoholona, niroso avy hatrany tamin’ny fandinihana sy fandaniana ny fitsipika anatiny ireo Loholon’I Madagasikara. Nisy ny fanovàna natao tamin’izany, indrindra teo amin’ny fandrafetana ny Birao maharitra sy ny vaomiera eo anivon’ny Antenimierandoholona. Ho an’ny birao maharitra manokana, telo no tapaka fa atao Filoha lefitry ny Antenimierandoholona, izay ahitana, filoha lefitra misolo tena ireo faritany avy any avaratra, ny filoha lefitra misolo tena ireo faritany avy any atsimo, ary ny filoha lefitra avy amin’ ireo mpanohitra. Etsy ankilany, kestiora iray ihany no handrafitra ny Birao maharitra (Questeur chargé de l’Administration des Finances et du personnel, des relations publiques et des fonctions législatives), miampy mpampaka teny iray, ka amin’ny tsy fahafahan’ny kestiora dia afaka misolo toerana ity farany izy. Vaomiera telo kosa no hisy eo amin’ity Andrimpanjakana ity manomboka izao. Hisy ny Vaomiera misahana ny fitantanam-bola, toekarena sy ny fampandrosoana maharitra, vaomiera misahana ny lalàna, ary ny vaomiera misahana ny ara-tsosialy, ara-koltoraly ary ny fifandraisana. Araka ny fanazavana, mpikambana enina no handrafitra ny vaomiera ary afaka mikambana ao anaty vaomiera roa ny Loholon’i Madagasikara iray. Marihana fa handalo eny anivon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ity Fitsipika anatiny ity. Aorian’izay vao hitohy indray ny Fivoriana eo anivon’ny Antenimierandoholona.
Iza i Herimanana Razafimahefa?
Teraka ny 11 Janoary 1957 i Herimanana Razafimahefa. 64 taona ny tenany ankehitriny. Manambady ary manan-janaka efatra. Nianatra tao amin’ny Epp Mahamasina Est, ary nandalo tao amin’ny Ecole Normale ihany koa, Nanohy ny ambaratonga faharoa teny amin’ny Lycée Gallieni izy, ary nanohy ny fianarany teny amin’ny Sampam-pampianarana toekarena teny Ankatso. Ary rehefa nahazo ny mari-pahaizana “licence” teny Ankatso izy dia nanohy ny fianarana ny toekarena tany amin’ny Oniversiten’I Grenoble II. Teo amin’ny lafiny arak’asa, efa niandraikitra ny toeran’ny Sekretera jeneralin’ny Minisiteran’ny Angovo sy ny Harena an-kibon’ny tany Razafimahefa Herimanana tamin’ny taona 2002. Ary anisany andraikitra nosahaniny nialohan’ny naha Senatera azy izao ny Sekretera jeneralin’ny Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Efa mpikambana ny Filankevitra ambon’ny Tetezamita ny tenany nandritra ny dimy taona. Ary anisan’ireo olona niara-niasa akaiky tamin’ny Filoha Andry Rajoelina hatry ny ela. Nanam-porofo izany ny naha mpitondra tenin’Atoa Andry Rajoelina azy nandritra ireny fifidianana Filoham-pirenena tamin’ny 2018 ireny.
MINISITRA LALATIANA ANDRIATONGARIVO: “Aoka isika tsy ho lany andro hamaly izay fanaratsiana”
BUCAREST ROMANIA : Namiratra ny Zandary malagasy tamin’ny fandrantoam-pahalalana
Fampitaovana ho an’ny fandriampahalemana : Matoky ny mpitandro filaminana malagasy ny Vondrona iraisampirenena
RAHARAHA RAVINALA AIRPORTS : Mitaky ny hanokafana « Enquête parlementaire » ny depiote